Iguzosi Ike n'Ihe Branddị Ahịa Ọ Nwụla n'Ezie? Ma ọ bụ iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa? | Martech Zone
Monday, December 18, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Mgbe obula m n’ekwu maka iguzosi ike n’ihe, a na m akuko akuko nkem mgbe m na azuta ugbo ala m. Ruo ihe karịrị afọ iri, eguzosiri m ike n’ebe Ford nọ. Enwere m mmasị n'ụdị, ịdị mma, ịdịte aka, na ire ahịa nke ụgbọ ala na gwongworo niile m zụtara n'aka Ford. Mana nke ahụ gbanwere ihe dịka afọ iri gara aga mgbe ụgbọ ala m chetara.
Mgbe ọ bụla okpomọkụ dara n'okpuru oyi na iru mmiri dị elu, ọnụ ụzọ ụgbọ ala m ga-ajụ oyi n'ezie. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ozugbo ị mepere ụzọ, ị gaghị emechi ya. Mgbe ọtụtụ oge dị egwu mechiri ọnụ ụzọ onye ọkwọ ụgbọala m n'ụzọ dị egwu, ụlọ ahịa m zụtara ụgbọ ala ahụ jụrụ ịrụ ọrụ na ya n'efu. Elere m onye nnọchi anya anya nke ukwuu wee gwa ya na ọ bụ edozighi edozi karịrị afọ. Onye njikwa ahụ jụrụ arịrịọ m ma kwuo na ha emeela ihe ncheta kwa ihe Ford chọrọ ma malite ịmalite ịgba m ụgwọ oge ọ bụla m webatara ụgbọ ala ahụ.
Tupu oge ahụ, M na-eguzosi ike n'ihe nye ika. Agbanyeghị, nke ahụ gbanwere ozugbo ahụ mgbe m matara na ika ahụ anaghị eguzosi ike n'ihe nye m.
Iwe were m nke na ụgbọala m Ford gabigara n'okporo ụzọ ma gbanye ụgbọ ala ahụ maka Cadillac ọhụrụ. Ọnwa ole na ole ka e mesịrị, agwara m nwa m nwoke ịzụta Ford ma zụta Honda. Ya mere, maka ihe na-erughị $ 100 na-arụ ọrụ, Ford kwụsịrị ahịa ụgbọ ala ọhụrụ 2 site n'ịghara ijide n'aka na e lebara m anya dị ka onye ahịa.
Onye ọ bụla na-ajụkarị ajụjụ ma ọ bụ na ọ bụghị iguzosi ike nwuru anwu. Ekwenyere m na anyị kwesịrị ịjụ ndị na-abụghị, bụ ezi ndị ahịa nwuru anwu?
Naanị 23% nke ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe nye akara ọ bụla n'oge a N'ihi gịnị? Ọfọn, ekele na atntanetị na mkpịsị aka anyị, anyị nwere nhọrọ. Mgbe ụfọdụ ọtụtụ narị nhọrọ. Ọ dịghị mkpa ka ị na-eguzosi ike n'ihe nye nsogbu nsogbu, ndị na-azụ ahịa nwere ike iji 30 sekọnd wee chọta akara ọhụụ. Ma eleghi anya ika nke kariri ekele maka ahia nke ndi n’iile.
Kedu ihe kpatara ndị ahịa jiri jiri akara mebie?
57% nke ndị na-eri ihe mebiri na a ika mgbe ha nyocha na-adịghị mma ka edobere ebe a na-enye ngwaahịa ndị yiri ya
53% nke ndị na-eri ihe mebiri na a ika mgbe o nwere nnabata data na ngari data
42% nke ndị na-eri ihe mebiri na a ika mgbe e nwere enweghị ọrụ ndị ahịa na-adị ndụ / oge support
38% nke ndị na-eri ihe mebiri na a ika mgbe e nwere ọ dịghị adọ ahịa na n'ọkwá ma ọ bụ na-enye
Na ụwa nke ego na mkpofu ngwa ngwa, ekwenyere m na azụmaahịa echefuola uru nke onye ahịa na-eguzosi ike n'ihe. Kwa afọ, ana m enyere ndị azụmaahịa aka ịchụpụkwu ụzọ na nnweta ngwaahịa na ọrụ ha. Mgbe ha na-ajụ m ihe ha nwere ike ịme karịa, ọ fọrọ nke nta ka m na-amalite ịjụ ha gbasara njide na iguzosi ike n'ihe ha. Ọ bụụrụ m ihe nzuzu na ụlọ ọrụ ga-emefu narị kwuru narị ma ọ bụ puku kwuru puku iji nweta ndị ahịa, mana ha ga-agọnahụ ha ahụmịhe ndị ahịa nke nwere ike ịbe ọkara nke nke ahụ.
Ọbụna dịka ụlọ ọrụ, m na-arụ ọrụ na usoro njigide m. Mgbe m nwere ụfọdụ ndị ọrụ ntụgharị afọ a, atụfuru m atụmanya ụfọdụ na ndị ahịa. Tupu ndị ahịa ahụ funahụ m, ezutere m ha, belata ego nkwekọrịta ha, wee nye nhọrọ maka otu anyị nwere ike isi rụzuo ọrụ ahụ. Amaara m na o siri ike inweta ntụkwasị obi nke onye ahịa yana mgbe ọ dị ihe egwu, amaara m na m kwesịrị ịrị elu ma gbalịa ime ya. Ọ naghị arụ ọrụ oge ọ bụla, mana ọ ka mma karịa ịchụpụ na ịtụgharị ndị ahịa aka ekpe na aka nri.
Naanị anyị kesara ihe ọmụma sitere na Bolstra na ROI nke Iguzosi Ike n'Ihe Ndị Ahịa. A na-eji nyiwe ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa dị ka nke ha kụziere ndị ọrụ dị n'ime, chọpụta nsogbu ndị na-eme ka ndị na-azụ ahịa gbahapụ, ma nyere gị aka tụọ mmetụta nke ọganiihu ndị ahịa na uru ahịa gị. Ndị otu tozuru etozu na-ahụ na uru ha na-aba na-emetụta nnukwu nsogbu mgbe njigide ndị ahịa ha dara. Na ijuputa bọket ga-arụ ọrụ naanị ruo mgbe ego gwụchara gị - nke anyị na-ahụ n'ọtụtụ mmalite.
Nke a bụ nkọwa zuru ezu sitere na Nyocha Nyocha, Iguzosi Ike n'Ihe Banyere Onye Nwụrụ Anwụ:
Tags: iguzosi ikeika iguzosi ike n'iheezi ndị ahịaNdị ọrụ nlekọta ndị ahịaahịadata mmebidata leaksnkata ndụndụ ahịa ọrụnkwado ndụiguzosi ike n'ihe mmemmenyocha ndị na-adịghị mmaịja mmaịja mma nyochaezigbo oge ahịa ọrụọrịre na nkwalite
Ahrefs na-ebupụta Ngwá Ọrụ Nyocha saịtị Ọhụrụ Dị Ego